दुब्लोपनले चिन्तित हुनुहुन्छ ? यो चिज खानुहोस्, एक रातमै देखिन्छ परिणाम – Deshko News
Home » स्वास्थ्य » दुब्लोपनले चिन्तित हुनुहुन्छ ? यो चिज खानुहोस्, एक रातमै देखिन्छ परिणाम
दुब्लोपनले चिन्तित हुनुहुन्छ ? यो चिज खानुहोस्, एक रातमै देखिन्छ परिणाम
केही मानिस आफू देब्लो भएकोमा निकै चिन्तित देखिन्छन् । आफूले लगाएको पहिरनसमेत उनीहरुलाई मन पर्दैन् । जसले गर्दा त्यस्ता मानिसले मोटाउनका लागि हरेक प्रयासहरु गरेका हुन्छन् तर, थोरै मात्रै सफल भएका हुन्छन् ।
यसका लागि एउटा उपायँ छ । भोक लाग्नेदेखि वजन बढाउनका लागि कालीमोर्चाको प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसको स्वाद अनौठो हुन्छ । यसबाट आयरन, पोटासियम, म्याग्नेशियम, जिङ्क, क्रोमियम, विटामिन ए र सी जस्तो पोषक तत्व पाइन्छ ।
एक अध्ययनले यसको प्रयोगले सीमितस्तरसम्म वजन बढाउन सकिन्छ । यसका लागि कालीमार्चाको चिया पनि खान सकिन्छ । कालीमार्चाको प्रयोग साग, सलाद, लड्डूमा प्रयोग गरेर खान सकिन्छ ।
यसरी यसको प्रयोग गरे वजन घटाउन सकिन्छ । यसले वजन घटाउन मात्रै नभई रुघाखोकीलगायतका स्वास्थ्य समस्या पनि समाधान हुन्छ ।